အကြင်နာနန်းတော်: မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့  လိုအပ်ချက်ကို ဖေါက်ထွင်းမြင်ကြည့်ခြင်း။
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့  လိုအပ်ချက်ကို ဖေါက်ထွင်းမြင်ကြည့်ခြင်း။
မိန်းကလေးတွေနဲ့ မကင်းနိုင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖတ်ကြည့်နော်..မိန်းခလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ယောကျာင်္လေးတိုင်းလိုအပ်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဖက်က ဘာတွေလစ်ဟင်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလဲ ဆိုတာအောက်ကစာလေးတွေကို ဆက်ဖတ်ပြီး ..ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ကြပါစို့နော်...
(ကိုယ့်ချစ်သူမိန်းခလေးကို ကိုယ်ကတစ်ခြားသူ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ နိုင်းခဲ့မိဖူးလား?)
(ကိုယ့်ကို့ချစ်လို့ အူတိုပြီး ရန်လုပ်တတ်တဲ့ချစ်သူကို စိတ်မရှည်သလိုဖြစ်ပြီးလျှစ်လျှူရှိခဲ့ဖူးပါသလား?)
(ကိုယ်ကကော ကိုယ်လုပ်ပေးသမျှ ပင်းပန်းတယ်လို့ ညီးငြူပြီး မျက်နှာထားနဲ့ပုတ်ခတ်ခဲ့ဖူးသလား?)
(ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ သင့်တစ်ခါလောက်အချစ်ခြင်း ပြိုင်ဖူးခဲ့ပါသလား?)
(ဒါတွေကိုကော ကိုယ့်ချစ်သူမိန်းခလေးအတွက် သင့်စိတ်နဲ့နိုင်းယှဉ်တွေးတောဖူးခဲ့သလား?)
(ကိုယ့်ကကော လက်လွတ်ဖို့ ရဲတင်းပြတ်သားမူ့မရှိပဲ ရိုင်းစိုင်းစွာ ထိုးရိုက်နှက်ခဲ့ဖူးပါသလား?)
(ကိုယ့်ချစ်သူကို နူးနူးညံ့ညံ့ အချိန်တိုင်းနားလည်မူ့တွေနဲ့ ဆက်ဆံဖူးခဲ့ပါသလား?)
(ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ နေရာလေးတွေ တူတူသွားဖို အချိန်သတ်မှတ် ခဲ့ဖူးပါသလား?)
(ချစ်သူရဲ့မိဘတွေကို ရိုသေလေးစားမူ့ စကားလေးတွေ သင်ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါသလား?)
အထက်ပါ အချက်ဆယ်ချက်မှာ ကိုယ်ဘာတွေလိုအပ်ပြီး လစ်ဟာ မူ့လေးတွေရှိခဲ့ဖူးသလဲ ဆိုတာ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရင်း ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အထင်ကြီး
လေးစားခြင်းခံရမဲ့ အချစ်သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဆန်းစစ်ကြပါလို့.....